Adobe® Photoshop® Touch 1.2 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 1.2 လွန်ခဲ့သော6နှစ်က
Application များ ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ Adobe® Photoshop® Touch
Adobe® Photoshop® Touch ၏ ဖော်ပြချက်
• Free membership to Creative Cloud gives you 2GB of cloud storage plus the ability to sync between tablet and desktop, access files from the web, and easily share with others. Learn more >http://www.adobe.com/products/creativecloudBy clicking the Install button, you acknowledge that you have read and agree to the Adobe Software License Agreement athttp://www.adobe.com/go/eulas.
Adobe® Photoshop® Touch အတွက် စတိုးအသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Adobe® Photoshop® Touch အပေါ် စတိုး ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
Adobe® Photoshop® Touch အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
Adobe® Photoshop® Touch အား အချက်ပြပါ
ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည် 27
လိုင်စင် လိုအပ်သည် 7
app အတု 13
modarsoos စတိုး 250 249.29k
Adobe® Photoshop® Touch နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း Adobe® Photoshop® Touch အချက်အလက်
အသုံးပွုရနျ ကိုကျညီမှု Android 3.1+ (Honeycomb)
ထုတျလုပျသူ Adobe Systems
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ http://www.adobe.com/privacy/policy.html
App Name: Adobe® Photoshop® Touch
File Size: 51.83MB
Release date: 2012-06-24 02:33:12
အနညျးဆုံး စခရငျ: XLARGE
လကျမှတျ SHA1: 3C:C3:F8:30:A1:00:DF:65:33:07:1F:D1:3D:4F:F3:D2:AD:8D:B2:5B
ထုတျလုပျသူ (CN): Adobe Systems Incorporated
အဖှဲ့အစညျး (O): Adobe Systems Incorporated
နယျမွေ (L): San Jose
Adobe® Photoshop® Touch APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ